Safal Khabar - चिनियाँ सर्भे टोलीले सगरमाथा शिखरमै पुगेर सक्यो मापन कार्य, नेपालको कहिले ?
चिनियाँ सर्भे टोलीले सगरमाथा शिखरमै पुगेर सक्यो मापन कार्य, नेपालको कहिले ?
शनिबार, १७ जेठ २०७७, ०८ : ५४
काठमाडौं । नेपालले सगरमाथाको मापन अन्तिम चरणमा पु¥याइरहेको बेला चिनियाँ सर्भे टोलीले सगरमाथा शिखरमै पुगेर मापन कार्य पूरा गरेको छ । ६५ वर्षअघि सन् १९५५ मा मापन भएको सगरमाथाको उचाइ हालसम्म ८ हजार ८ सय ४८ मिटर अर्थात् २९ हजार २८ फिट मानिँदै आइएको छ । सगरमाथाको नयाँ मापनले अब नयाँ उचाइ कति छ भन्ने विषयमा यथार्थ विवरण आउनेछ ।
सन् २००५ मा चिनियाँ नापी सर्भेपछि सगरमाथाको उचाइ ८ हजार ८ सय ४४ दशमलव ४३ रहेको र त्यसमा हिउँको उचाइ चार मिटर रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो । चिनियाँ पक्षले निकालेको सर्भे विवादमा आएपछि सन् २०१० मा नेपाल र चीनबीच सगरमाथाको उचाइ ८ हजार ८ सय ४८ मिटर नै कायम गर्ने गरी सहमति जुटेको थियो ।
चिनियाँ सर्भेमा रहेका ३० जना सगरमाथाको शिखरमा पुगेर फर्केपछि नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले नेपाल र चीनले संयुक्त रूपमा सगरमाथाको उचाइ सार्वजनिक गर्ने बताएकी छन् । राजदूत यान्छीले ट्वीट गर्दै चिनियाँ सर्भेयरले पनि चुचुरोमै पुगेर सगरमाथाको नाप लिएको बताएकी छन् । उनले ट्वीटरमा फोटो पोस्ट गरेर २६ मे २०२० मा चिनियाँ सर्भेयर टोली सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेको बताइन् ।
नेपालका तर्फबाट भने सगरमाथा मापनको अन्तिम काम अझै बाँकी रहेकाले उचाइ तत्काल सार्वजनिक नहुने नापी विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालले बताए । चीन र नेपालले सगरमाथाको उचाइ सार्वजनिक गर्ने विषयमा नापी विभागलाई कुनै जानकारी नभएको ढकालको भनाइ छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
विश्व महामारीकाबीच चिनियाँहरूले सुरु गरे सगरमाथा आरोहण
चिनियाँ आरोहीहरूले सगरमाथा आरोहण अभियान सुरु गरेका छन् । ...
अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस : सगरमाथाको चुचुरोमा गरिएको कल्पनाको सङ्कल्प...
विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्नु चानचनुे...
बिना अक्सिजन सगरमाथा आरोहण गर्दै
अत्याधिक चिसो हुने, हिउँ परिरहने र बाटो...
सगरमाथा मापन योजना : स्थलगत काम सकियो
नेपाल सरकारले पहिलो पटक सुरु गरेको सगरमाथा...